Ogaden News Agency (ONA) – Ururuka Culimada Ogadeniya (UCSO) oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay.
Ururuka Culimada Ogadeniya (UCSO) oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay.
Gudiga fulinta ee Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia (UCSO) ayaa kulan muhiim ah kuyeeshay xerada qoxootiga Ifo ee deegaanka Dhadhaab.
Kulankan oo ahaa midkii caadiga ahaa ee gudiga fulinta ee Ururka UCSO oo 3dii biloodba mar qabsooma ayaa ah mid mar walba lagaga arinsado geedi socodka guud ee halganka iyo waliba howlaha gaarka ah ee ururka waxaana kasoo qayb gala xubnaha gudiga fulinta oo kakala yimaada wadamo kala duwan.
Ugu horaynba gudiga ayaa kala qaatay warbixino kala duwan waxaana laguda galay ajandihii shirka oo dhowr qodob kakoobnaa, waxaana ugu dambayntii kasoo baxay go’aamo wax ku ool ah oo shacabka Soomaalida Ogadenia iyo halganka ay JWXO hormuudka utahayba wax tar u leh.
Culimadu waxay baaq udireen dhamaan shacab waynaha Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaalida Ogadenia ee gumaysi diidka ah, waxayna culimadu kubaaqeen in aan laga caajisin howlaha lagu raadinayo gobonimada iyo xoriyada gayiga Ogadenia.
Sidoo kale culimada ayaa shacabka ugu baaqay in ay kafogaadaan kana digtoonaadaan dhagarta cadawgu uu shacabka dulman umaleegayo iyo gabi ahaanba wax kasta oo shaki galin kara wadaniyada waxna udhimi kara damiirka iyo caqliga xalaasha ah.
Ugu dambayntii kulankan oo labo maalmood socday ayaa lagu soo gunaanaday qur’aan aad ubadan oo isla goobta lagu akhriyay, waxaana bulshada lafaray in ay joogteeyaan akhrinta qur’aanka iyo duca oo Allaah laga baryo xoriyad iyo nabad galiyo iyo in Alaah uu nasri ufuro shacabka dulman ee S,ogadenia.
Gabagabadii geesiyaasha JWXO ee jiido hore ayaa ilaahay loo baryay in uu garabkooda ahaado isla markaana uu soonsiiyo guusha, wuxuuna kulanku kusoo dhamaaday sinabad galiyo ah.